Raiki-pitia tamin’ny vehivavy manambady: Inona no azoko atao
faly izahay ny momba ny liana amin’ny kintana. Indrisy anefa fa, ny Browser dia antitra loatra ny toerana. Azafady mampiasa ny Dikan-vaovao ny Internet Explorer na ny hafa Navigateur toy ny Firefox, na Chrome. Misaotra Anao Be Dia Be. Richard efa lavo ao ny fitiavana, ny lohany taorian’ny ho an’ny vehivavy, fa izy dia nanambady. Ary na dia roa matetika no hihaona, te ianao tsy manana ny raharaha miaraka aminy. Na dia nandao ny vadiny. Ahoana no izy no mivoaka avy amin’ity toe-Draharaha ity. Ry Ramatoa Pierino, efa lavo ny fitiavana momba ny herintaona lasa izay, ao ny manambady vehivavy (Olivia). Rehefa nahita anao aho, dia nanana ny premonition izay mety ho mampidi-doza. Izy mihitsy ny vehivavy aho fikarohana: tena tsara tarehy, manan-tsaina, ny fisainana, sy amin’ny fomba voajanahary tena manaitaitra. Aho mpitsabo nify, izy dia marary ny ahy, ary dia tonga taorian’ny fitsaboana isika na minia sy fanahy iniana, ao ny lavany, dia haingana ny lohahevitra momba ny resaka tsy miankina. Mazava ho azy, dia afaka ny hiresaka tena tsara sy mafy. Foana aho nijery ho an’ny vehivavy, fa tsy afaka an-tsaina fa misy olona iray izay tena toy izany ary ny toetra tsara izay mitady aho. Ary ny maro hafa. Miasa aho Blankenese toy ny fitondran-tena mpitsabo sy ny fitiavana mpanazatra manokana fanao any Hamburg. Ao ny PhD aho nanao fikarohana momba ny fifandraisana eo amin’ny fifandraisana ny toetra sy ny vintana sy ny fitiavana, ary avy eo dia boky roa momba ny fitiavana voasoratra. Amin’ny teny fohy, dia toa ka adala. Fa izy no nahazo ahy manolana hevi-teny teo amin’ny lohany. Na izany aza, dia nilaza ny tao am-boalohany ny resaka, mazava tsara ary afaka milaza aminao izahay, fa izy dia manambady, sambatra am-panambadiana, ary tsy handeha ho azy dia avy ny fanontaniana. Ary ny fisarahana amin’ny vadiny. Hatreto, na inona na inona no ao ny tari-dalana no mitranga, na dia isika dia manomboka ny voa matetika kokoa ho an’ny kafe na fa mandeha any amin’ny tsy miankina. Raha izaho, dia tsy maintsy milaza fa crackles, dia ho voatosika tanteraka eo ambany. Izany matanjaka. Izahay na eo amin’ny fitiavana ny tsirairay, izy no namboraka ho ahy, araka izay efa nanontany anao ny fotoana ny fihetseham-po. Fa ny zava-misy mitoetra: tsy te hamitaka amin’ny vadiny. Mivoaka miaraka amiko, dia tsy mandihy, dia afaka manoratra tena be dia be, ary dia foana ny tena misokatra sy mahery vaika. Fa tsy misy Vintana fa dia mandao ny vadiny, na ny traikefa nahafinaritra ahy nianjera. Azoko sary an-tsaina, na izany aza, tsy ny traikefa na ny raharaha amin’ny azy izy, fa te-hiaraka aminy. Ny ankamaroan ny fotoana dia afaka hiatrehana ny Toe-javatra tena tsara. Ny asa manembantsembana ahy. Manana sipa, izaho haka be dia be (aho dia tsy toy izany amin’ny fitiavana tahaka anao ireo ankehitriny Olivia.) Saingy indraindray, ny fahadisoam-panantenana ho an’ny ahy, na, fa nahita ny marina ny vehivavy, fa tsy miaraka aminy dia afaka ho. Mety ho tena mahafinaritra, Ary mahatsapa aho fa miankina amin’ny azy ireo, satria fantatro fa tsy hifarana ity tantara ity ka mora foana. Izaho no tena mijaly. Tsy miresaka amin’ny namana momba ny fihetseham-pony, satria manantena aho fa ianao, mba lazao amiko: Inona avy no te-handeha any. Ianao ilay mampijaly ny tenanao.
Amim-pahatsorana aho dia manana namana Izany taham, dia mety ho ny hany fomba hendry, ary hitako ny tenako ho toy ny olona hendry. Nefa izaho tsy afaka ny Olivia, ary tsy te. Efa mafy ny nofinofy sy ny daydreams aminy, dia faly aho fa ny mikasika ny vaovao no manoloana ny faly Hihaona sy hamela ny tsipiriany rehetra momba ny Fihaonana indray mandeha indray, arivo heny. Tsy afaka hanome izany. Manana hevitra mikasika ny fomba azoko tsara kokoa hiatrehana ny Toe-javatra.
Ry Richard H, omeko ny namana tsara. Mety ho ny hany Safidy hendry dia mba manaova tsipika. Satria ianao no ao Olivia tsy ny mpiara-miasa, hitady ilay iray izay manonofy ny. Maro ny faniriana, dia mijanona ho tanteraka. Ny fifandraisana no nanjavona: Tsy oroka, tsy misy ny Firaisana ara-nofo. Tsy fahita herinandro, tsy misy fiainana andavanandro, tsy misy mpiray fanapahan-kevitra mikasika ny lehibe sy ny kely ny fanontaniana momba ny fiainana. Hoy aho hoe, mety ho antonony mba hanome ny zava-drehetra. Izy ireo dia malahelo nandritra ny fotoana kelikely, ary avy eo dia angamba indray, bebe kokoa ny fahatoniana sy fiadanana anaty. Fa ahoana no mandeha raha tsy nanana fifandraisana amin’ny Olivia. Mety tsy ho ampy iray tena manan-danja pejy ny fiainana, raha toa ka hisakana amin’ny fitiavana ny quasi-iniana. Angamba tokony ho namana ny hevitra fa lehibe ny fihetseham-po foana ny vidiny. Ianao momba ny traikefa ny zavatra tena Manokana. Toy izany feo, izany no Fotoana voalohany eo amin’ny fiainana izay tsy mahatsapa ho toy ny ho an’ny vehivavy. Ny fomba mety ho azo raha toa izy ireo milaza ny tenany, ny fahatsiarovan-tena, fa ny damn sarotra ny mitandrina ny fifandraisana amin’ny Olivia, fa amin’ny Lalana maro ny DEHIBE sy ny ratsy, ny maha irery, Fahadisoam-panantenana, alina tsy ahitan-tory, ary zavatra maro hafa. Fa amin’ny lafiny hafa, amin’ny fihetseham-po, ny mahatonga Olivia ao aminy, izy ireo ihany no tena tonga velona. Izany dia mety fa raha tsy izany tsy maintsy miteny ny zava-misy, maro ny fahombiazana marimaritra iraisana dia ho eo amin’ny fiainana. Olivia nanaitra anareo, escorts anareo ao anatiny, mitondra ny tantaram-pitiavana side ny Lelany. Andrea nihaona nandritra ny Atrikasa Yannis. Izany dia niteraka eo amin’ny roa. Be ny fifanakalozan-kevitra sy ny alina nanaraka, fa mandritra izany fotoana izany, Yannis dia mihoatra lavitra. Anisan’ny olana fifandraisana tantara. Angamba ianao mety hahatonga ny fanapahan-kevitra matotra mba handray ny fatiantoka sy ny downsides adala io fifandraisana. Ary ny ao anatiny, ny hoe: ataoko fa manana fihetseham-po ireo, hilaza avy ao an-tsaiko, na inona na inona sy tsy handresy. Izany no zava-dehibe fa tsy ny olana mitranga, ny saina sy ny tena fomba fikarakarana. Raha toa ianao mahatsiaro ho manirery ianao, dia afaka manoratra, ohatra, ny mahafantatra ny fihetseham-po ho an’ny tenanao. Na manao fanatanjahan-tena. Na hanao fialam-boly, fanatanjahan-tena. Azonao atao koa ny mahita ny ao an-namana ny olona izay tsy miatrika ny fitiavana lohahevitra ao amin’ny hendry sy fotsy sy mainty, fa koa dia misokatra ho azy, mba hanome tsy mahay mandinika ny Fifandraisana trano. Izany dia tsara dia mizara amin’ny olona iray izay efa nanana traikefa toy ny. Ny fitiavana no tena fihetseham-po-voatosika, tsy misy lojika ary indraindray tsy misy fotony. Tsy afaka ny fanaraha-maso izay intsony ianao ho fitiavana na ho tena mifanaraka amin’ny tady, raha toa tsy mifanaraka. Angamba afaka mamela ny tenanao mba ho araka ny fihetseham-po entin’ny sy ny mitaingina indraindray toy ny sambo kely tamin’ny tafio-drivotra eo amin’ny onja ny fihetseham-ponao. Raha ny fahitàna azy, dia sarobidy ho anao, ary ianao tsy te-ho tara izany. Zavatra iray hafa: Jereo ny teboka izay Olivia tsy te hamitaka amin’ny vadinao, raha toa ianao ka tsy nanao izany aza izy. Nilaza zavatra tena manan-Danja momba ny tenanao sy ny fetra. Handeha aho mba hilaza fa ianao tsy mahatsapa any anatiny izay mety ho tsara ho anao, na izy ireo fa na dia hivadika izy ireo rehefa manao izany fitsipika izany. Izany mety ho manan-danja izany dia manome ny fanantenana Olivia dia ho mpiara-miasa. Manao ny fetra sy ny lalao ny fifandraisana fitsipika dia tena mazava tsara ny mahafantatra, ary miezaka mba hanosika azy mba hahazoana bebe kokoa ny heriny sy ny fahavitrihan’ny. Ary ireo fihetseham-po ireo ny ankamaroany dia mifandray amin’ny fanaintainana. Mafana na amin’inona, Julia Pierino Daniela manana raharaha amin’ny olona manambady. Ho anareo, dia ny fitiavana lehibe, fa izy dia tsy te-hametraka. Ny fanambadiana dia toa zava-dehibe ho azy, fa ny raharaha izy dia tsy te-hiala. Ahoana no Daniela hiatrehana izany
← Mampiaraka chat online
Malaza Mampiaraka →